ပြည်သူငွေတွေကို အချောင်စားရလို့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရမယ်မထင်လေနှင့် … ပြစ်မှုထင်ရှားရင် ထောင်နှစ် ၂၀ ပါဗျ – CharTake
chartake | November 24, 2020 | life style | No Comments
အဂတိ လိုက်စားမှုက ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အကုန်သိမ်း​ပြီး ပြစ်ဒဏ် ကတော့ ထောင်ဒဏ် အနှစ် (၂၀) ပါဗျ။ မလုပ်ဖူးလို့ ထင်​နေပါသလား ? အဂတိ လိုက်စားလို့ တရားသူကြီး ဝန်ကြီးချုပ် မကျန် ထောင်ထဲအရောက်ပို့ထားတဲ့ သာဓကတွေ ရှိခဲ့တယ်နော်။ (အရပ်သား အစိုး ရ လက်ထက် )
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရာအိမ်မှူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆယ်အိမ်မှူးပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ် အဂတိ လိုက်စားခဲ့ရင် သက်သေ အခိုင်အမာနဲ့ ပြည်သူကတကယ်တိုင်ကြားခဲ့ရင် အဂတိလိုက်စားသူ ဘယ်သူမဆို တကယ် ထောင်ထဲ ရောက်ပါမယ် ။ အဂတိ လိုက်စားကြောင်းလာဘ် ငွေ မတရားယူကြောင်း သက်သေ အထောက်အထားခိုင်မာဖို့တော့ လိုပါမယ်။
တကယ် ဘာမှ မထူးပါဘူးလို့ ပြောနေသူတွေ အဂတိ တိုက်ဖျက်မှုအဖွဲ့ရဲ့ အရေးယူမှု အများကြီးထဲက လာဘ်ငွေ ၁၀ သိန်းကျော် ပ မာဏနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အရေးယူ ထောင်ချခံရတဲ့ သာဓက ရှိပါတယ်။ စာများများဖတ်ပါ … မြန်မာ့သတင်းများကိုနားစွင့်ပါ။
(မှတ်ချက်) ဒီလို ရေးတင်ရတာက တကယ်နှစ်နာပြီး မပြောရဲ မဟရဲသူ မြို့သူ/သားတွေ အတွက် အားပေးတဲ့ သဘောပါ ။မည်သူ့ကိုမှ နစ်နာ စေလိုတဲ့ ဆန္ဒ မရှိပါဘူး။ လေးစားစွာဖြင့် Crd ; Min Kyaw Kyaw Min (မွန်ကရင် နယ်စားမင်း)
Unicode … ပွညျသူငှတှေကေို အခြောငျစားရလို့ ခမျြးခမျြးသာသာ နရေမယျမထငျလနေငျ့ … ပွဈမထငျရးရငျ ထောငျနဈ ၂၀ ပါဗြ
အဂတိ လိုကျစားမက ပိုငျဆိုငျမတှေ အကုနျသိမျးပွီး ပွဈဒဏျ ကတော့ ထောငျဒဏျ အနဈ (၂၀) ပါဗြ။ မလုပျဖူးလို့ ထငျနပေါသလား ? အဂတိ လိုကျစားလို့ တရားသူကွီး ဝနျကွီးခြုပျ မကနျြ ထောငျထဲအရောကျပို့ထားတဲ့ သာဓကတှေ ရခဲ့တယျနျော။ (အရပျသား အစိုး ရ လကျထကျ )
အုပျခြုပျရေးမးပဲ ဖွဈဖွဈ ရာအိမျမးပဲ ဖွဈဖွဈ ဆယျအိမျမးပဲ ဖွဈဖွဈ တကယျ အဂတိ လိုကျစားခဲ့ရငျ သကျသေ အခိုငျအမာနဲ့ ပွညျသူကတကယျတိုငျကွားခဲ့ရငျ အဂတိလိုကျစားသူ ဘယျသူမဆို တကယျ ထောငျထဲ ရောကျပါမယျ ။ အဂတိ လိုကျစားကွောငျးလာဘျ ငှေ မတရားယူကွောငျး သကျသေ အထောကျအထားခိုငျမာဖို့တော့ လိုပါမယျ။
တကယျ ဘာမ မထူးပါဘူးလို့ ပွောနသေူတှေ အဂတိ တိုကျဖကျြမအဖှဲ့ရဲ့ အရေးယူမ အမြားကွီးထဲက လာဘျငှေ ၁၀ သိနျးကြျော ပ မာဏနဲ့ ပွငျဦးလှငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမး အရေးယူ ထောငျခခြံရတဲ့ သာဓက ရပါတယျ။ စာမြားမြားဖတျပါ … မွနျမာ့သတငျးမြားကိုနားစှငျ့ပါ။
(မတျခကျြ) ဒီလို ရေးတငျရတာက တကယျနဈနာပွီး မပွောရဲ မဟရဲသူ မွို့သူ/သားတှေ အတှကျ အားပေးတဲ့ သဘောပါ ။မညျသူ့ကိုမ နဈနာ စလေိုတဲ့ ဆန်ဒ မရပါဘူး။ လေးစားစှာဖွငျ့ Crd ; Min Kyaw Kyaw Min (မှနျကရငျ နယျစားမငျး)